प्रकाशको परिचय - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
प्रकाशको पुस्तकलाई परमेश्‍वरले बुझ्नको लागि चाहनुभएको सन्दर्भमा मात्र बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि अन्य सन्दर्भले गलत व्याख्या उत्पन्न गर्नेछ - एक अनिश्चित ध्वनि। "किनकि यदि तुरहीले अनिश्चित आवाज दिन्छ भने, कसले आफैलाई युद्धको लागि तयार गर्नेछ?" (I Cor 14:8) यदि तपाईंले एक अनिश्चित आवाज प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंले बुझ्नुहुनेछैन कि तपाईंको आत्माको विरुद्धको वास्तविक युद्ध कहाँ छ, र शत्रुले तपाईंलाई पराजित गर्नेछ।
सन्दर्भलाई "घटना हुने परिस्थितिहरू" भनेर परिभाषित गरिएको छ। प्रकाश भनेको पुस्तकको अध्ययन मात्र होइन - तर अझ धेरै। हामीलाई प्रकाश प्राप्त गर्ने "घटना" वरिपरि उपयुक्त आध्यात्मिक अवस्थाहरू चाहिन्छ - यदि हामीले यसलाई साँचो स्पष्टताका साथ प्राप्त गर्न चाहन्छौं जुन उद्देश्य थियो। यो येशूको प्रकाश हो आफैलाई र उहाँको साँचो मण्डलीको (“ख्रीष्टको शरीर”, येशूको पनि साँचो प्रतिनिधित्व।) यसले हामीलाई सुसमाचारको सत्यलाई धोका दिन र भ्रमित पार्न झूटो धर्म मार्फत कसरी शैतानले काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्छ।
अन्तमा, यो परमेश्वरको सामु हामी आध्यात्मिक रूपमा कहाँ छौं भन्ने कुराको प्रकटीकरण हो। जब हामी साँच्चै येशूलाई उहाँ जस्तै देख्छौं, हामीले उहाँलाई कस्तो हेर्छौं भन्ने एक गम्भिर दर्शन पनि प्रकट गर्नेछौं!
बुझ्नको लागि उपयुक्त सन्दर्भलाई येशूले पहिलो अध्यायमा पूर्ण रूपमा पहिचान गर्नुभएको छ। वास्तवमा, हामीले यो पुस्तक कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा, अध्याय पहिलोमा हामीलाई भनिएको छ। येशूबाट प्राप्त गर्न सक्षम हुन प्रेरित यूहन्नासँग सही आध्यात्मिक अवस्था हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी यी निम्न सन्दर्भहरूलाई ध्यानपूर्वक विचार गरौं, र निश्चित गर्नुहोस् कि हामी आफैं पनि यही आध्यात्मिक परिस्थितिहरूमा अध्ययन गरिरहेका छौं!
येशूको प्रकाश - सबैभन्दा पहिले, पद १ ले बताउँछ कि यो येशूको प्रकाश हो, जुन परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो। यो अरू कसैको होइन। अनि त्यसमा किताब लेखेर बेचेर धेरै पैसा कमाउने अधिकार अरू कसैलाई छैन। यदि तपाइँसँग ती प्रकारका पुस्तकहरू मध्ये एक छ भने, यो बेकार भन्दा पनि खराब छ भनेर ढुक्क हुनुहोस्, किनभने यसमा धोका छ! जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न पठाउनुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो: “अनि तिमीहरू जाँदा, स्वर्गको राज्य नजिकै छ भनी प्रचार गर। बिरामीहरूलाई निको पार्नुहोस्, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार्नुहोस्, मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुहोस्, शैतानहरूलाई निकाल्नुहोस्: सित्तैमा पाएका छौ, सित्तैमा दिनुहोस्।" सबै राज्य र लाभहरू परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएको छ, जसले तिनीहरूलाई इमानदारीपूर्वक प्राप्त गर्नेछ। उसले कसैलाई यसको लागि चार्ज गर्न वा यसको लागि व्यक्तिगत क्रेडिट लिन अनुमति दिँदैन। किनभने आध्यात्मिक रूपमा सबै राम्रो, वास्तवमा परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको हो।
पठाइयो द्वारा सेवकहरू - पद १ ले हामीलाई यो पनि बताउँछ कि येशूले प्रकाश सन्देश दिनुहुने सन्देशवाहकहरू/प्रचारकहरू मात्र साँचो "सेवकहरू" हुन्। नोकरले अरू कसैको हित गर्दैन, तर आफ्नो मालिकको। होइन, आफ्नो स्वार्थ पनि होइन। एक साँचो सेवक येशूप्रति आज्ञाकारी हुन्छ, किनकि उसले पाप र शैतानको शक्तिबाट पूर्णतया छुटकारा पाउँछ। आफ्नो मालिकको कृपा र शक्तिले, उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा आफूलाई नम्र, शुद्ध र पवित्र राख्छ। येशु हात मात्र राख्छ यी साँच्चै नम्र सेवकहरूमा, उहाँको सन्देश सुनाउन। र यो यूहन्नाको बारेमा सत्य हो जसलाई येशूले प्रकाश सन्देश दिनुभयो, त्यसैले हामीसँग पनि यो हुन सक्छ। यूहन्नाले हामीलाई पद १७ मा पुन: सुनाएका छन्, कि जब उहाँले येशूलाई देख्नुभयो, उहाँ नम्र भई "मरेको रूपमा उहाँको पाउमा परे। अनि उसले आफ्नो दाहिने हात ममाथि राख्यो।” यूहन्ना प्रभुको नम्र सेवक थिए।
पठाइयो को सेवकहरू - पद १ ले हामीलाई प्रकाश सन्देश पृथ्वीमा केवल एक वर्गका मानिसहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ भनेर बताउँछ: "सेवकहरू।" जो मालिक, येशू ख्रीष्टको "स्वामित्व" हुन्। तिनीहरू उहाँसँग प्रेमद्वारा बाँधिएका छन्, र तिनीहरूले आफ्नो जीवनको लागि सबै लक्ष्यहरू र योजनाहरू, प्रभु र मालिकको उद्देश्य र योजनालाई बुझाएका छन्। उहाँका सेवकहरूको रूपमा, तिनीहरू पनि येशूको सेवाको लागि सताइएका छन्। तैपनि यसले तिनीहरूको आत्मामा येशूको अझ ठूलो प्रकटीकरण, र उहाँलाई ठूलो तरिकामा पूजा गर्न र पूजा गर्नको लागि मात्र कारण दिन्छ। यसैकारण प्रेरित यूहन्नाले प्रकाश प्राप्त गर्दा पाटमोस टापुमा हुनुहुन्थ्यो। साँचो क्रिस्चियन भएको कारणले उहाँलाई सताइएको थियो र त्यहाँबाट निकालिएको थियो। तर त्यहाँ हुँदा पनि उहाँ आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किनकि पद ९ र १० मा उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ:
"म जोन, जो तपाईंको भाइ पनि हुँ, र सङ्कष्टमा र येशू ख्रीष्टको राज्य र धैर्यमा साथी हुँ, परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको लागि पाटमोस भनिने टापुमा थिएँ। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ"
समय कभर - प्रकाश लगभग AD 90 मा लेखिएको थियो, र पद 1 ले बताउँछ कि प्रकाशले "छिट्टै हुने" कुराहरू समेट्छ। पद ३ ले भन्छ "समय नजिकै छ।" पद १९ ले प्रकाशले कभर गरेको समयलाई यसरी स्पष्ट पार्छ: "तिमीले देखेका कुराहरू, र भएका कुराहरू, र भविष्यमा हुने कुराहरू लेख्नुहोस्।" आज हामी २१ औं शताब्दीमा छौं । धेरै जसो प्रकाशमा छ, पहिले नै आइसकेको छ, र इतिहासमा रेकर्ड गरिएको छ। त्यहाँ अझै केही आउन बाँकी छ - विशेष गरी, अन्तिम निर्णय।
बुझ्नको लागि परमेश्वरको सम्पूर्ण वचन चाहिन्छ - पद २ ले भन्छ "कसले परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको अभिलेख राख्यो"। पद 10 देखि 12 ले बताउँछ कि जब येशूले यूहन्नासँग कुरा गर्नुभयो, येशू उहाँको पछाडि हुनुहुन्थ्यो। र जोनले उहाँलाई हेर्नको लागि फर्कनु पर्यो। र जब उहाँ उहाँलाई हेर्न फर्कनुभयो, उहाँले येशूलाई "सातवटा मैनबत्तीहरूको बीचमा" देख्नुभयो - विगतको बाइबलीय इतिहासको आध्यात्मिक वस्तु। हामीले आफ्नो पछाडि सुनेको आवाज, बाइबलमा रेकर्ड गरिएको परमेश्वरको वचन हो।
"अनि तिम्रा कानहरूले तिम्रो पछिल्तिर एउटा शब्द सुन्‍नेछन्, यसो भन्दै, बाटो यही हो, यसमा हिँड।" ~ यशैया ३०:२१
प्रकाश बुझ्नको लागि, हामीले मैनबत्ती सहित धेरै प्रतीकहरूको अर्थ बुझ्नको लागि पहिले नै विगतमा रेकर्ड गरिएको परमेश्वरको वचन वा "हामी पछाडि" प्रयोग गर्नुपर्छ: "आध्यात्मिक चीजहरूलाई आत्मिकसँग तुलना गर्ने" (I कोर २:१३)। प्रकाश भित्रको प्रतीकात्मक अर्थ बाइबलको बाँकी भाग अध्ययन गरेर व्याख्या गरिएको छ। प्रकाश एक आध्यात्मिक पुस्तक हो, र तपाईंले प्रतीकहरूलाई शाब्दिक रूपमा अनुवाद गर्न सक्नुहुन्न। प्रकाशमा उल्लेख गरिएका जनावरहरू र जीवहरूले मानिसहरूको हृदयमा आत्मिक अवस्थाहरू प्रतिनिधित्व गर्छन्: शाब्दिक, भौतिक चीजहरू होइन। त्यहाँ एक शाब्दिक राक्षसी जनावर कहिल्यै हुनेछैन, जो लाखौं मानिसहरूलाई नष्ट गर्न पृथ्वीमा आउनेछ।
प्रकाशका यी प्रतीकहरूको आध्यात्मिक अर्थ छ, र त्यो आत्मिक अर्थलाई विशेष गरी शब्दको सन्दर्भ चाहिन्छ जुन "शरीर बनाइयो र हामी बीचमा बस्यो" (यूहन्ना १:१४)। त्यसकारण पद २ ले हामीलाई "र येशू ख्रीष्टको गवाही" जो "परमेश्वरको वचन" (प्रकाश १९:१३) हो भनेर बताउँछ। प्रकाश सन्देशले येशूलाई प्रकट गर्दछ आफैलाई हामीलाई! वास्तविक येशू! धेरैलाई येशूको बारेमा थाहा छ, तर व्यक्तिगत रूपमा येशूको आफ्नै उपस्थिति कहिल्यै प्रकट भएको छैन। जब साँचो येशूले उहाँको उपस्थितिद्वारा आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, तपाईं कहिल्यै उस्तै हुनुहुन्न! आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उहाँको सेवा गर्नको लागि पापबाट फर्कनको लागि तपाईं पूर्ण पश्चात्तापमा आफैलाई नम्र बनाउनुहुन्छ, वा तपाईं आफ्नो पापमा झन् कडा रूपमा दौडिनुहुन्छ। वा अझ नराम्रो, तपाईं आफूलाई सामेल हुनको लागि तथाकथित "क्रिश्चियन" धर्म खोज्न खोज्नुहुन्छ, जहाँ पापले तपाईंको हृदय र जीवनमा काम गरिरहेको भए तापनि तपाईं राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
पढ्नु, बुझ्नु र राख्नुको मतलब - पद ३ ले यसो भन्छ: "धन्य हो त्यो जसले पढ्छ, र जसले यस अगमवाणीका वचनहरू सुन्छ, र त्यसमा लेखिएका कुराहरूलाई पालन गर्दछ।" प्रकाशलाई पूर्ण रूपमा पढ्न र अध्ययन गर्न समय लाग्छ। र येशूले के प्रकट गरिरहनुभएको छ सुन्न र बुझ्नको लागि आत्मिक, आज्ञाकारी कान चाहिन्छ। र साँच्चै आत्मिकले प्रकाशमा पाइने निर्देशनहरू पालन गर्नेछन्।
येशूबाट उहाँको मण्डलीमा पठाइयो - पद ४ ले "सात मण्डलीहरूलाई यूहन्ना।" र पद 11 मा येशूले यूहन्नालाई निर्देशन दिनुहुन्छ "तिमीले जे देख्छौ, एउटा पुस्तकमा लेख, र यसलाई सात मण्डलीहरूमा पठाउनुहोस्।" र पद 20 मा, येशूले यूहन्नालाई बताउनुहुन्छ कि "तिमीले देखेका सातवटा मैनबत्तीहरू सात मण्डलीहरू हुन्"। त्यसोभए हामीले पनि येशूको चर्च साँचो सेवकहरू मिलेर बनेको छ भनेर देख्न थाल्छौं! प्रकाश सन्देश येशूलाई प्रकट गर्न हो चर्चमा र मण्डलीलाई बन्नबाट चेतावनी दिन: झूटा सेवकहरू र झूटा मण्डलीहरू, झूटा येशूलाई पछ्याउँदै!
येशू राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ - पद ४ ले देखाउँछ कि उहाँ सधैं हुनुहुन्थ्यो: किनकि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ आउनुहुनेछ। पद5ले देखाउँछ कि उहाँ "राजाहरूका राजकुमार" हुनुहुन्छ जुन प्रेरित पावलसँग सहमत हुनुहुन्छ, जसले I तिमोथी 6:15 मा भनेका छन् कि येशूले आफूलाई राजाको रूपमा प्रकट गर्नुहुनेछ: "उहाँले आफ्नो समयमा देखाउनुहुनेछ, जो धन्य र एकमात्र हुनुहुन्छ। शक्तिशाली, राजाहरूका राजा, र प्रभुहरूका प्रभु।" यो साहसपूर्वक र स्पष्ट रूपमा अन्त नजिकै भनिएको छ, सबैले बुझ्नको लागि अन्तिम तथ्यको रूपमा: "राजाहरूका राजा, र प्रभुहरूका प्रभु" (प्रकाश 19:16)। अरू सबै राजाहरू उहाँकै अधीनमा छन्। त्यसैले ढिलो हुनु अघि नै उहाँको सेवक हुनको लागि तिनीहरूले आफूलाई नम्र बनाउनु उचित हुन्छ! परमेश्वरले स्थापना गर्नुहुन्छ, र उहाँले तल राख्नुहुन्छ: पुरुष र महिलाहरूले आफूलाई के सोच्छन्। येशूको आराधना गर्ने एउटै तरिका भनेको उहाँलाई राजा र प्रभुको रूपमा आफ्नो र मण्डलीको लागि सबै चीजहरूमा आदर र पूजा गर्नु हो।
येशूले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, र हाम्रो लागि मर्नुभयो -यसैकारण उहाँ राजाको रूपमा सम्मानित हुन योग्य हुनुहुन्छ। पहिलो अध्यायको पद5मा येशू भन्नुहुन्छ "विश्वासी गवाही हुनुहुन्छ, र मरेकाहरूबाट पहिलो जन्मनुभएको, र पृथ्वीका राजाहरूका राजकुमार हुनुहुन्छ। उहाँसामु जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, र उहाँको रगतले हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो।” यद्यपि उहाँले हामीलाई उहाँको प्रकाश सन्देशको साथ कडा चेताउनी र सच्याउन सक्नुहुन्छ - उहाँले यो गर्नुहुन्छ किनभने उहाँले हामीलाई पर्याप्त माया गर्नुहुन्छ, यदि हामीले पश्चात्ताप गर्न र सही हुन आवश्यक छ भने हामीलाई हल्लाउनको लागि। हामी हराएको उहाँ चाहनुहुन्न!
बुझ्न र आराधना गर्नको लागि परमेश्वरको आत्मा पनि हुनुपर्छ - पद4ले "र उहाँको सिंहासन अगाडि रहेका सात आत्माहरूबाट" बताउँछ यसले सन्देश सुन्न र बुझ्न सक्षम हुनको लागि प्रत्येक सात मण्डलीहरूमा काम गर्ने परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। यससँग सहमतिमा, प्रत्येक मण्डलीको मण्डलीलाई येशूका शब्दहरूको अन्त्यमा, येशूले प्रत्येक पटक यी ठ्याक्कै उस्तै शब्दहरूसँग आग्रह गर्नुहुन्छ। "जसको कान छ, उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ।" आत्मिक चीजहरूलाई आत्मिकसँग तुलना गर्न सक्षम हुनको लागि परमेश्वरको आत्मा लिन्छ।
"तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई उहाँको आत्माद्वारा हामीसामु प्रकट गर्नुभएको छ: किनकि आत्माले सबै कुराहरू, हो, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू खोज्नुहुन्छ। किनकी मानिसमा भएको मानिसको आत्मा बाहेक मानिसको कुरा के थाहा हुन्छ? त्यसरी नै परमेश्‍वरका कुराहरू कसैले जान्‍दैन, तर परमेश्‍वरका आत्‍माले जान्‍नुहुन्‍छ। अब हामीले संसारको आत्मा होइन, तर परमेश्वरको आत्मा पाएका छौं। परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको कुराहरू जान्न सकौं। जुन कुरा हामी पनि बोल्छौं, मानिसको बुद्धिले सिकाउने शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। अध्यात्मिक चीजहरूसँग आध्यात्मिक कुराहरू तुलना गर्दै। तर प्राकृतिक मानिसले परमेश्‍वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन: किनकि ती उहाँका लागि मूर्खता हुन्: न त उहाँले तिनीहरूलाई जान्‍न सक्‍नुहुन्‍छ, किनकि तिनीहरू आत्मिक रूपमा चिन्‍नेछन्।” (१ कोरिन्थी ३:१०-१४)
जब उपासनाको उचित आत्मामा, तब हामी आध्यात्मिक रूपमा हेर्न, सुन्न, बुझ्न र चेतावनी लिन सक्षम हुनेछौं। यसरी प्रेरित यूहन्नाले प्रकाश प्राप्त गर्न सक्षम भए, किनकि पद 10 मा यूहन्नाले बताउँछ कि "म प्रभुको दिनमा आत्मामा थिएँ" जब मैले सुनेको र प्रकट भएको देखेको थिएँ। नम्रतापूर्वक येशूको आज्ञा पालन गर्ने, पूजा गर्ने र आराधना गर्नेहरू आराधनाको आत्मामा हुनेछन् - र येशूले प्रकट गर्दा बुझ्नेछन्।
कसरी येशू आउनुहुन्छ र आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ - पद7ले स्पष्ट पार्छ कि उहाँले यो कसरी गर्नुहुन्छ: "हेर, उहाँ बादल लिएर आउनुहुन्छ; र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन्, र उहाँलाई छेड्नेहरूले पनि देख्नेछन्: र पृथ्वीका सबै जातिहरू उहाँको कारणले रुनेछन्। तैपनि, आमेन।" उहाँ आउनुभएको बादलहरू साधारण बादलहरू होइनन्:
“त्यसैले देखेर हामी पनि यती महान् ए साक्षीहरूको बादल, हामी सबै भारलाई पन्छाएर, र पाप जसले हामीलाई सजिलैसँग घेर्छ, र धैर्यताका साथ दौडौं जुन हाम्रो सामु राखिएको छ, हाम्रो विश्वासको लेखक र पूरा गर्ने येशूलाई हेर्दै; जसले उहाँको सामु राखिएको आनन्दको लागि, लाजलाई तुच्छ ठान्दै क्रूस सहनुभयो, र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बसाइनुभयो।" (हिब्रू १२:१-२)
"बादल" ले सेवकहरूको भेलालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तिनीहरूको हृदयको सिंहासनमा येशूलाई आराधना गर्न। साँचो सेवकहरू हुन्: एउटै शरीर, एउटै मण्डली, परमेश्वरको आराधना गर्ने। र जो झूटा सेवकहरू छन् तिनीहरू साँचो सेवकहरूको बीचमा रहेको "उहाँको कारणले विलाप" गर्छन्।
येशूले भन्नुभयो, "जहाँ दुई वा तीन जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म तिनीहरूका बीचमा छु।" (म्याट 18:20) यो समयको अन्त्यमा मात्र होइन, किनकि येशूलाई क्रूसमा टाँगिनु अघि, उहाँले त्यस समयका मुख्य पुजारीलाई भन्नुभयो: “अब तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्तिको दाहिने हातमा बसेको देख्नेछौ। र आकाशको बादलमा आउँदैछ।" (मत्ती २६:६४) मुख्य पुजारीले यसलाई कसरी हेरे? पेन्टेकोस्टको दिन पछि, जब पवित्र आत्मा आयो, मुख्य पुजारीले देखे: साँचो इसाईहरू एउटै शरीरको रूपमा, सँगै आराधना गर्दै, र येशू तिनीहरूको बीचमा शक्तिशाली रूपमा, तिनीहरूको हृदयको सिंहासनमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ! तिनीहरू आफैं "स्वर्गका बादलहरू" थिए जहाँ येशू परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्नुभएको थियो। अनि जब मुख्य पुजारी र अन्य यहूदीहरूले यो देखे, र तिनीहरूको हृदयमा यसको कारण पीडा भयो।
अन्तमा, "तिनीहरू जसले उहाँलाई छेड्यो” (प्रकाश १:७) सबै जसको पापले उहाँलाई क्रुसमा मर्नु परेको छ, तर पनि तिनीहरूले येशूको सेवा गर्न पश्चात्ताप गरेका छैनन्। गोलगोथाका ती थोरै सिपाहीहरू मात्र होइन जसले उहाँलाई क्रूसमा टाँग्दा शारीरिक रूपमा छेडेका थिए। बादलमा उहाँलाई देखेर धेरै "विलाप" गर्छन्, किनभने तिनीहरू उहाँको रगत बगाएकोमा दोषी छन्। तपाईंले पापबाट छुटकारा दिन उहाँको रगतलाई आफ्ना पापहरूको लागि दयालु बलिदानको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ; वा तपाईं त्यही रगतको दोषी हुनुहुन्छ। यो नयाँ नियमको शिक्षा मात्र होइन, तर यो पुरानो नियममा पनि सत्य थियो:
“र परमप्रभु बादलमा झर्यो, र तिनीसँगै उभिए, र परमप्रभुको नाउँको घोषणा गरे। अनि परमप्रभु उहाँको अगाडिबाट भएर जानुभयो, र घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु, परमप्रभु परमेश्वर, दयालु र अनुग्रही, धीरज र भलाइ र सत्यमा प्रशस्त, हजारौंको लागि कृपा राख्नुहुन्छ, अधर्म र अपराध र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, र त्यो कुनै पनि हालतमा दोषीलाई सफा गर्दैन; छोराछोरीहरू र छोराछोरीहरूका छोराछोरीहरूमाथि, तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म पिता-पुर्खाहरूको अधर्मको दण्ड दिने।” (प्रस्थान ३४:५-७)
साक्षीहरूको बादलमा, येशूलाई ग्रहण गर्नेहरूलाई प्रभुको ठूलो कृपाको साक्षी छ। तर जसले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्, तिनीहरू पहिले नै तिनीहरूको पापको कारण दोषी छन्। र परमेश्वरले अझै पनि "दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुहुनेछैन"। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रा पापहरूको लागि एकमात्र बलिदानको रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ, जुन उहाँले स्वीकार गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले उहाँको पुत्रलाई अस्वीकार गर्नुभयो र उहाँको विश्वासी सेवक हुन असफल हुनुभयो भने, तपाईंले आफैलाई थाहा छ कि पापले अझै पनि तपाईंको हृदय र जीवनमा काम गरिरहेको छ, र तपाईं अझै पनि परमेश्वरको सामु दोषी हुनुहुन्छ!
बुझ्नको लागि उचित सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ! शैतानको सहायताले, धार्मिक मानिसले सत्यलाई राम्ररी भ्रमित गरेको छ: परमेश्वर र उहाँको पुत्र येशू, उहाँको वचन, उहाँको मुक्तिको योजना, उहाँको चर्च, र उहाँको प्रकाश सन्देश। तर भ्रमित धर्मका अधिकांश मानिसहरू पनि यस बिन्दुमा सहमत हुनेछन्: हावा स्वर्गमा भ्रमबाट पूर्ण रूपमा सफा छ। स्वर्गमा मात्र छ: एउटै परमेश्वर, एक परमेश्वरको पुत्र, एक पवित्र आत्मा, एक राजा, एक सत्य, एक सिद्धान्त, मुक्ति को लागी एक योजना, र एक चर्च। तपाईं किन सोध्न सक्नुहुन्छ? किनभने भगवान भ्रमित हुनुहुन्न! यदि तपाईं स्वर्गमा पुग्नुभयो भने, तपाईंले कुनै पनि व्यक्तिलाई केहि पनि भ्रमित गर्न अनुमति दिनुहुने छैन, किनभने स्वर्गमा भगवान राजा हुनुहुन्छ र अरू सबैले उहाँको पूजा र आराधना गरिरहेका छन्।
र सत्य यो हो कि पृथ्वीमा यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ धार्मिक मानिसको भ्रम छैन। परमेश्वरको साँचो मण्डलीमा येशू राजा हुनुहुन्छ। र उहाँका साँचो सेवकहरूले उहाँलाई आफ्नो हृदयको सिंहासनबाट आराधना, आज्ञापालन र पूजा गरिरहेका छन्। बाइबलले यसलाई पृथ्वीको "स्वर्गीय स्थान" भनेको छ जहाँ पापबाट मुक्ति पाएकाहरू बस्छन् र सत्यमा सँगै बस्छन्, परमेश्वरको आराधना गर्ने एउटा चर्चको रूपमा: "र हामीलाई सँगै उठाउनुभयो, र हामीलाई एकसाथ बसाल्नु भयो। स्वर्गीय स्थानहरू ख्रीष्ट येशूमा" (एफिसी २:६)।
“हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर, महिमाका पिताले तिमीहरूलाई बुद्धि र बुद्धिको आत्मा दिनुभएको होस्। प्रकटीकरण उहाँको ज्ञानमा: तपाईंको समझको आँखा प्रबुद्ध हुनु; कि उहाँको बोलाउने आशा के हो, र सन्तहरूमा उहाँको उत्तराधिकारको महिमाको धन के हो, र उहाँको पराक्रमी शक्तिको कार्य अनुसार विश्वास गर्नेहरूका लागि उहाँको शक्तिको अत्याधिक महानता के हो भनी जान्न सक। , जसलाई उहाँले ख्रीष्टमा बनाउनुभयो, जब उहाँले उहाँलाई मरेकाहरूबाट ब्यूँताउनुभयो, र उहाँलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा उहाँको दाहिने हातमा राख्नुभयो, सबै राज्य, शक्ति, शक्ति, र प्रभुत्व, र हरेक नाउँ जो नाउँ गरिएको छ, त्यो भन्दा माथि, होइन। केवल यस संसारमा, तर भविष्यमा पनि उहाँलाई मण्डलीमा सबै चीजहरूको शिर हुन दिनुभयो, जुन उहाँको शरीर हो, उहाँको पूर्णता जसले सबै कुरामा भर्दछ।" (एफिसी १:१७-२३)
परमेश्वरको मण्डली येशूको "पूर्णता" हो। र येशू विभाजित, बहु-सैद्धान्तिक, न त भ्रमित हुनुहुन्छ। प्रश्न छ: के तपाईं?
के तपाईंसँग प्रकाशलाई बुझ्नको लागि उपयुक्त सन्दर्भ छ? यदि होइन भने, तपाईंले बुझ्ने प्रयासहरू व्यर्थ हुनेछन्, जबसम्म तपाईं आफैंलाई उहाँको स्वामित्वको सेवक हुन पूर्ण रूपमा नम्र हुनुहुन्न। र उहाँको आराधना र आज्ञापालन गर्नुहोस्, उहाँको सेवकहरूको शरीर, उहाँको मण्डली, परमेश्वरको साँचो मण्डलीको साथ।